Ahlu-Sunna oo ku gacan seyrtay guddiga farsamada Galmudug – Hornafrik Media Network
Ahlu-Sunna oo ku gacan seyrtay guddiga farsamada Galmudug
War-saxaafadeed ka soo baxay xaafiiska madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Cali Xasan ayaa lagu sheegay in Ahlu-Sunna aysan khuseyn shuruudihii ay shalay soo saareen guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug.
Dowladda federaalka ayaan wali hadlin liiska xildhibaanada ay shalay soo saartay Ahlu-Sunna Waljamaaca, kuwaas oo ay 20 xubnood oo ay ugu tala galeen inay uga mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Qaar ka mid ah odayaasha Galmudug ayaa horay uga hadlay arinta Ahlu-Sunna ayaa si weyn uga soo horjeestay qaabka ay u soo qoondeeyeen xubnahaas, waxayna ku edeeyeen Ahlu-Sunna in saami sax ah aysan ka qaadan Beelaha Galmudug iyo inay kuraasta qaar ku soo qoreen shaqsiyaad aan qoondo ahaan u laheyn, taas oo sheegeen inay meesha ka saareyso wax qeybsiga beelaha ee haatan la-isla ogolyahay.
Halkan ka akhriso War-saxaafadeedka.
75aa988e 64eb 41ec 9ab3 D6b527a639d5
Baroor diiq qaran oo looga dhawaaqay dalka Burkino Faso.
Dad u badan caruur oo ku dhintay duqayn ka dhacday dalka Suuriya.